Dowladda Kenya oo shuruud ku xirtay xiriirka khilaafka Diblumasiyada ee lagu xalinayo Soomaliya iyo Kenya – Walaal24 Newss
February 18, 2019	10	By walaal24
Dowladda Kenya ayaa soo saartay saddex shuruudood oo lagu xallinayo khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya soomaaliya.
Kenya waxay doonaysaa in Muqdisho si deg deg ah looga saaro khariidadda badeed ee Shidaalka, lagu soo bandhigay shidaalka oo ka dhacay Boqortooyada Ingiriiska, iyadoo sheeganaysa in qayb ka mid ah bada Kenya.
Kenya ayaa sidoo kale dalbatay in mas’uuliyiinta Soomaaliya ay ku wargeliyaan kuwa iibsaday shidaal iyo gaas ku yaal xayeysiinta London ee ah in waddanka Geeska Afrika uusan laheyn degaankaas.
Tan seddexaad, Kenya waxay doonaysaa in dood badda u dhaxaysa labada waddan ay ku yimaadaan xal nabadeed oo ka baxsan maxkamadda caalamiga ah.
Shalay, Xoghayaha Maamulaha Arrimaha Dibadda Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ay rajeenayso in saddexda shuruudood ay tahay in ay la kulmaan xaalad horudhac ah oo dib loogu soo celinayo xiriirka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya, taas oo ka dhigtay wixii dhacay Sabtidii.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay diiday beenisay saliideed ama gaas ah sida lagu sheegay. “Soomaalidu hadda ma bixinayso, mana lahan wax qorshe ah oo ay ku bixiso, wax walba oo ka mid ah goobaha badda lagu muransan yahay illaa inta dhinacyadu ay go’aaminayaan ICJ,” ayaa warqad ka soo baxaday Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaliya, ka akhrisay Wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya.
Macharia Kama ayaa sheegaya in Kenya ay ka niyad jabtay in Muqdisho ay u tagtay London si ay u xaraashato xuduudaha xitaa ka hor inta uusan khilaaf ka dhex galin qodobo shidaal ah, oo ku yaala Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda.
“Marka dib loo eego diblomaasiyadda ma lihid guuldarada, laakiin waa guul. Waxaan rajeyneynaa in saaxiibadeena ay qaban doonto. Ma haysanno waqtiyo lagu sugayo jawaabta, “ayuu Macharia yiri markii la weydiiyay rajada Nairobi.
Dowlada Kenya ayaa waxay u muuqataa ineysan ku qanacsaneyn Maxkamada Caalamiga ay dacwada hortaal, dooneysanay in hoos loo dhameeyo Bad aysan lahayn oo ay ka danbeeyeen Rag mas’uuliyiin Soomaliyeed, iney Badaas sheegato ama ay ku qabsato Soomaaliya, waana Gardaro geed lagu ganban. sidaas waxaa yiri Aqoonhan Maxamed Cade.
Golaha Aqalka sare oo maanta warbixin ka dhageystay Guddiga Doorashooyinka Qaranka
Wasiir ka tirsan xukumadda Kenya oo Maanta Muqdisho lagu soo dhaweeyay
Wasiirka Arrimaha dibadda: “Laguma deg degin go’aanka aan ka qaadanay Haysom…….